မြင့်မားသော Temp Epoxy မြင့်မားသော Temp Epoxy မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
မြင့်မားသော Temp Epoxy
Soar Technology Co., Ltd ၏ဒီဇိုင်း, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာနှင့်ထုတ်လုပ်မှုသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်ပြည်ပသို့ပို့ကုန်ဖြစ် မြင့်မားသော Temp Epoxy။ ကျနော်တို့တွင်တည်ရှိပြီး, Taiwanအဆင်ပြေလွယ်ကူသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူ။ ကျွန်ုပ်တို့ပစ္စည်းများအားလုံးသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရဲ့အရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူလိုက်လျောအလွန်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်မတူညီတဲ့အမှတ်အသားအမျိုးမျိုးနဲ့တန်ဖိုးထားကြသည်။
မတူညီတဲ့ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့်အတူ။ သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရ, စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်သင့်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုခရီးဦးကြိုပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။ ရုံငါတို့သည်သင်တို့အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်ပေးတော်မူမည်, ကျွန်တော်တို့ကိုသင်တို့အလိုပြောပြပါ။
ပုံစံ - High temperature curing epoxy Type-153
epoxy ဗဓေလသစ်၏ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများအပြင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့်ထိခိုက်ခံရ,အဆိုပါအေးဂျင့်သည်၎င်း၏အပူခုခံထိခိုက်အရေးကြီးသောအချက်များတစ်ခုဖြစ်သည်.ပုံမှန်အားဖြင့်,အဆိုပါအလုပ်လုပ်တဲ့အုပ်စုများနှင့်ရောဂါပျောက်ကင်းအေးဂျင့်များ၏ဓာတုမော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံအဆိုပါမော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံထုတ်လုပ်ရန် epoxy ဗဓေလသစ်နှင့်အတူတုံ့ပြန်,အဆိုပါပျောက်ကင်းသောဗဓေလသစ်၏ပုံစံနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အညီပြောင်းလဲလိမ့်မည်.ထို့ကြောင့်,epoxy ဗဓေလသစ်ကော်၏ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဒီဇိုင်းသည်ကော်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်.epoxy ဗဓေလသစ်သည်ပျောက်ကင်းသောတုံ့ပြန်မှုကိုခံယူသောအခါ,၎င်း၏မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံ၏ epoxy group သည်သက်ဆိုင်သော induction effect ကိုရရှိလိမ့်မည်.အကြောင်းမှာ epoxy ဗဓေလသစ်မော်လီကျူးကွင်းဆက်ရှိ epoxy group ၏အောက်စီဂျင်အက်တမ်သည်အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်,အုပ်စုကွင်းဆက်၏အဆုံးတွင်ကာဗွန်အက်တမ်ရှိသည်.အများအပြားအပြုသဘောဆောင်တဲ့စွဲချက်ရှိပါတယ်,ဒါကြောင့် nucleophiles နှင့်လျှပ်စစ်ဓါတ်ကူပစ္စည်းအားလုံးသည် epoxy ပျောက်ကင်းစေသည့်ထုတ်ကုန်ကိုထပ်ဆင့်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်စေသည်,နှင့် epoxy ဗဓေလသစ်မော်လီကျူးလက်စွပ်ဖြစ်ကြသည်-ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် polymerized.ထိုကဲ့သို့သော alicyclic anhydrides အဖြစ်,မွှေးကြိုင် Amines,ကျောက်တံတား,ဆီလီကွန်ဗဓေလသစ်,မွှေးကြိုင်ကွင်း,စသည်တို့.
ဤထုတ်ကုန်သည် 2002 နှင့်ကိုက်ညီသည်/95EC RoHS စည်းမျဉ်းများ.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.probe-needles.com/my/high-temp-epoxy.html
အကောင်းဆုံး မြင့်မားသော Temp Epoxy ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် မြင့်မားသော Temp Epoxy ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ မြင့်မားသော Temp Epoxy ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan
မြင့်မားသောအပူချိန် Epoxy ဗဓေလသစ်
မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် epoxy ဗဓေလသစ်သည်မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အပူရှိန်မှု၏ဆက်စပ်သောသိပ်သည်းမှုနှင့်အပူကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည့် epoxy အုပ်စုများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။-ခံနိုင်ရည်အရိုးစု.epoxy ဗဓေလသစ်ပြီးနောက်မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံကိုကုသသည်,အဆိုပါ epoxy ဗဓေလသစ်အုပ်စုများကိုကူးဖြစ်ကြသည်-ကြီးမားသောပြည်တွင်းရေးစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မော်လီကျူး Epoxy ဆောက်လုပ်ရေးကြောင့်ဆက်စပ်.မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆနှင့်အခြားအကြောင်းပြချက်ကော်ဖြစ်ပေါ်စေသည်’brittleness အဖြစ်ချို့ယွင်းချက်,သက်ရောက်မှုခုခံ,အပူခုခံ,နှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခုခံ,သော epoxy ဗဓေလသစ်ကော်၏ application range ကိုကန့်သတ်.ဒီအတွက်ကြောင့်,ကျွန်ုပ်တိုင်းပြည်ရှိသက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်များသည် epoxy resin ကော်၏ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်ကိုတိုးတက်အောင်သုတေသနများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်.ဥပမာ,bisphenol အီအမျိုးအစား epoxy ဗဓေလသစ်၏ပြင်ဆင်မှု၌တည်၏,၎င်း၏မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံအပေါ် epoxy အုပ်စုတစ်စုရှုပ်ထွေးသောသုံးကတည်းက-heterocyclic လက်စွပ် membered,epoxy ဗဓေလသစ်ပြီးနောက်,မွှေးကြိုင်သောလက်စွပ်တည်ဆောက်ပုံများကို၎င်း၏မော်လီကျူးကွင်းဆက်တွင်ထုတ်လုပ်လိမ့်မည်,အပူပေးနိုင်စွမ်းလျော့နည်းစေပြီးပျော့ပျောင်းမှုတိုးပွားစေသည်.ထို့ကြောင့်,ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်း,သိပ္ပံပညာရှင်များ bisphenol epoxy ဗဓေလသစ်၏မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံအတွက် isopropyl အုပ်စုကိုအလွန် polar sulfone အုပ်စုနှင့်အစားထိုး,အရာထိရောက်စွာကုသသော epoxy ဗဓေလသစ်၏အပူတည်ငြိမ်မှုနှင့်အပူခုခံတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်. ဒါဟာမြင့်မားသောထဲမှာပါတဲ့နှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ thixotropy ရှိပါတယ်.အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်တင်းမာ၏လုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်း,လွတ်လပ်စွာမချည်နှောင်နိုင်ပါ. မာကြောသောမျက်နှာပြင်သည်ချောကျိကျိနှင့်အရောင်တောက်ပမှုမရှိပါ. ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောရှုထောင့်အကွာအဝေးတွင်ကောင်းမွန်သောရှုထောင်တည်ငြိမ်မှုရှိသည်. မာကြောသောပစ္စည်းများသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအကာအကွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုထိတ်လန့်ခြင်းတို့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်. ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးစမ်းသပ်မှုအပြီးတွင်ဤထုတ်ကုန်မှထိန်းသိမ်းထားသောအစွမ်းသတ္တိသည်ကောင်းမွန်ဆဲဖြစ်သည်. ဒီဗဓေလသစ်၏မာကြောထားသောပစ္စည်းသည်ဓာတ်ငွေ့ရောအရည်အတွက်ပါကောင်းမွန်သောခံနိုင်ရည်ရှိသည်. ဤထုတ်ကုန်သည် 2002 နှင့်ကိုက်ညီသည်/95EC RoHS စည်းမျဉ်းများ.
မြင့်မားသော Temp Epoxy ဗဓေလသစ်
မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် epoxy ဗဓေလသစ်သည် epoxy resin glueability ရှိသည်,ရိုးရှင်းသောထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ကောင်းသောပြည့်စုံသောစွမ်းဆောင်ရည်,နှင့်ကျယ်ပြန့်ဘဝနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများနယ်ပယ်များတွင်အသုံးပြုသည်.မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသောကော်၏မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်စွမ်းရည်သည်အဓိကအားဖြင့်အပူဓာတ်တိုးနိုင်မှုတည်ငြိမ်မှုနှင့်ကုသသောထုတ်ကုန်၏အပူပုံပျက်သောအပူချိန်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။.အဆိုပါသက်တမ်းရှိထုတ်ကုန်များ၏အုပ်စုဖွဲ့စည်းပုံအကွာအဝေးတိုတောင်း,အဆိုပါ crosslinking သိပ်သည်းဆသာ.လက်စွပ်,heterocycles နှင့်အခြားမြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသောအုပ်စုများလည်းတိုးလာလိမ့်မည်,နှင့်အပူပုံပျက်အပူချိန်ကိုလည်းတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်.ဤဆောင်းပါးသည်မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသော epoxy ဗဓေလသစ်ကော်ကော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနည်းလမ်းများနှင့်သြဇာသက်ရောက်စေသောအချက်များကိုဆွေးနွေးထားသည်.In-နက်ရှိုင်းသောလေ့လာမှု. မာကြောသောမျက်နှာပြင်သည်ချောကျိကျိနှင့်အရောင်တောက်ပမှုမရှိပါ. ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောရှုထောင့်အကွာအဝေးတွင်ကောင်းမွန်သောရှုထောင်တည်ငြိမ်မှုရှိသည်. မာကြောသောပစ္စည်းများသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအကာအကွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုထိတ်လန့်ခြင်းတို့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်. ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးစမ်းသပ်မှုအပြီးတွင်ဤထုတ်ကုန်မှထိန်းသိမ်းထားသောအစွမ်းသတ္တိသည်ကောင်းမွန်ဆဲဖြစ်သည်. ဒီဗဓေလသစ်၏မာကြောထားသောပစ္စည်းသည်ဓာတ်ငွေ့ရောအရည်အတွက်ပါကောင်းမွန်သောခံနိုင်ရည်ရှိသည်. ဤထုတ်ကုန်သည် 2002 နှင့်ကိုက်ညီသည်/95EC RoHS စည်းမျဉ်းများ.